The Soul Of FEELLiFE: Nye The 3rd Way Of dosing N'ihi mmadụ Nigeria
1. The Surge® Frequency Nchigharị Nebulization Technology
Ịgba imeghari iku ume ugboro amamihe. The ịgba ọnụego na ego nwere ike gbanwere dị ka onye ọrịa ahụ na-eku ume ugboro, dịkwuo deposition ọnụego nke mmiri mmiri ke miri akpa ume. Otu ugboro akakabarede nebulization nhata ka ochie nebulization mode ugboro atọ.
2. na-ehicha onwe Technology
Na a ngwaọrụ nke nwere ike iwepụ na nebulizer mpempe-akpaghị aka mgbe ike-on. The nebulizer ga-aba akpaka ihicha mode mgbe agbanwuru ha, na crank elu ike idaputa mmapụta ọgwụ na a mmetụta ka ukwuu ike na mmalite 5 sekọnd, iji belata onu nke ọgwụ mkpọchi.
3. okpomọkụ Control itinye n'ọkwa na akọrọ-ere Ọkụ Prevention Technology
Okpomọkụ akara itinye n'ọkwa: ihe NTC itinye n'ọkwa nebulizer. Nebulizer nwere a NTC thermistor nke nwere ike ịchọpụta na ọnọdụ okpomọkụ nke ihe ngwọta na ọgwụ cup, ọ ga-belata okpomọkụ na-akpaghị aka mgbe okpomọkụ esịmde 45 ℃, tumadi na-echebe ọrụ nke mmiri mmiri.
Akọrọ ọkụ Prevention technology: eji kpo oku arụchi ịchọpụta ma ọ bụrụ na ihe ngwọta na mmiri mmiri nkwakọba na-okụre. The nebulizer mechie-ala mgbe ọ na-enwe mmetụta na ihe ngwọta na mmiri mmiri nkwakọba na-agba ọsọ, na-echebe ndị nebulizer ibe-ebibi akọrọ ọkụ.
4. Lithium Titanate Battery Kwadoro System
Na elu-okpomọkụ na-eguzogide, gbawara-àmà ọrụ na elu nchekwa arụmọrụ, iwu na-agbapụta n'ahụ nwere ike iru 3000 cycles, ndị ọrụ ndụ dị ruo 5 afọ.
5. Mesh® Nebulizer Ibe ihe onwunwe na Laser ọkasị mma punching Technology
Titanium alloy nebulizer ibe nwere ike imeri corrosion, na ezi biocompatibility, na-eme ka nebulization odi mfe.
The laser perforation-eme na pore n'obosara na 2.5um ± 25%, na-eme ka ịgba ahụ ọzọ siri, dịkwuo deposition ọnụego nke mmiri mmiri ke miri akpa ume, na-eme ka ọgwụ absorption na nrụpụta ọrụ karị.